CANAB KORAYA OO KU JIRA LAYNKA DHEXE, TALOOYIN LOOGU TALAGALAY BILOWGA - CANAB
Astaamaha laga helo canab beerto dhexe, talooyin ku saabsan kuwa bilowga ah
Waxaa laga yaabaa in aaggaaga jiilaal aad u dheer iyo heerkulbeegga kuleylka ah inta badan jiilaalka badanaa calaamada markasta -20, laakiin tani ma yeelato si ay u beertaan beertii canabka ahayd, iyo talooyinkeena, waxay koraan beergooyska qorraxda qorraxda.
Noocyada nooca sabiibka ah si ay u koraan kuwa bilowga ah ee dhexda dhexe
Dabcan, canabku wuxuu ku baxaa ku dhowaad caws kasta oo xagaaga ah haddii aanad ku noolayn koonfurta, badanaa waa canab "Isabella". Darajada aan qabyada ahayn, waxay bixisaa goosashada ba'an, goobaha shaaha laga bilaabo qorraxda iyo qurxinta xayndaabka. Laakiin berry waa yar yahay, dhanaan iyo dhadhan dhadhan. In ka badan dhowrkii sano ee la soo dhaafay, thanks to shaqo xulashada ee hiwaayadda iyo xirfadlayaasha, winegrowers ayaa horumariyey noocyo badan leh caabbinta dhaxan sare iyo berry oo macaan weyn. Xulo badan oo kala duwan oo leh noocyo kala duwan oo ah dhadhan iyo midabyo of berry, qaababka buraashka ah ee ka mid ah badda badhtankeeda, waxaan dooran doonaa ugu fiican ee canab ee qaybta dhexe.
Ka dib iibsaday sapling varietal, waxaan ka filan karaa goosashada wanaagsan. Haddii aad rabto in aad ku koraan canab iyada oo dareen ah ee berry ka soo caddaan si casaan, dooran noocyada jiilaalka-adag tahay:
Haddii aad doorato noocyo canab leh oo midab leh oo midabyo ah oo buluug ah ilaa mugdi madow, ka dibna fiiro gaar ah u leh noocyadaas:
Kishmish gaar ah
Noocyada noocan oo kale ah waxay leeyihiin miro badan oo macaan leh oo leh caraf udgoon oo jilicsan.
Maxaa muhiim ah in la ogaado beeritaanka canab
Waa muhiim! Dhirta canabku waa kuwa ugu wanaagsan ee laga soo iibsado kuwa soo iibsada hiwaayadda, xayawaanno waaweyn oo miro ah ama ka soo jeeda. Waxaa lagu talinayaa in la yimaado oo la arko sida canabku u kori karo noocyada kala duwan ee la doonayo ee xannaanada, sida ay u tahay midho, waxa uu u baahan yahay. Iibsashada jirridda ama sabirta, waxaad xaqiijin doontaa in aad si toos ah u iibsatay noocyada kala duwan. Ka fogow suuqyada dabiiciga ah.
Markaad iibsan canab, raac xeerarka
Geed berhan guga (Maarso - Abriil)
Waxaa ugu wanaagsan inaad ka iibsato canab geed canab ka iibiya wax walba oo ku saabsan canab iyo sii kordhaya waxayna ku farxi doonaan inay kula wadaagaan aqoonta iyo talooyinka ku saabsan sida loo daryeelo, tus sawiro ka soo jeeda beertaada. Sii cinwaanka iyo lambarka telefoonka.
Faseexaadda laba-sano waxay yeelan doontaa nidaam xidid adag oo leh xididada iftiinka.
Geedooyinka la iibsaday waxay u baahan yihiin in lagu daweeyo diyaar garowga "BI-58" ama "Kinmiks" (qadar labajibbood) oo ka soo jeeda cayayaanka sabiib ah - phylloxera. Isticmaal daroogada biyaha ku jirta 2 ml. 10 litir oo biyo ah. Ku qoyso geedkan xalka ah nus saac iyo maydh.
Geedo la iibsaday waxaa lagu beeray waddada kaliya ee tobanka sano ee labaad ee Juun. Ka hor inta aan la saarin, waxay ku kaydsan yihiin boorsooyinka warqadaha leh dufcado.
Bilowga Maajo, waxaad ku beeri kartaa baaldiyaal shan litir ah waxayna u koraan koonfurta ilaa June.
Sawirku wuxuu muujinayaa dhuudhka canabka ah ee laba jir ah oo leh nidaam xidid adag.
Ka dib markii la beero geedka canabka ah, waxaan dooraneynaa meel laga xiro dabaylaha woqooyiga (derbiga dusha, guri ama xaydaanka), qorraxda. Carrabku waa inuu ahaadaa dheecaan (ma ahan biyaha hoose). Canabku waxay doorbidaan qorshaha safarka koonfurta ilaa waqooyiga. Haddii ay jirto xitaa khiyaamo yar, ka dibna canab beerto ku dheji koonfurta ama koonfur galbeed.
Marka goobta gebi ahaanba la wada daboolo, derbiyada koonfureed ee guriga horeyna u degan yihiin, markaa waxaad dhisi kartaa xayndaab aan ka badneyn laba mitir oo ujeedada bari iyo galbeed. Oo markiiba haddiiba ha ka welwelina qarsoon ee canabkiinna canabka ah xabbadood. Waxaad ka dhigi kartaa xayndaabka xayndaabka oo qoyan.
Siyaabaha beerto canab
1. Haddii ciidda beeritaanka canabku waa bac, ka dibna geedo waa in lagu dhex beeray godad.
2. Haddii ciidda ay tahay dhoobo ama dhoobo (carradu ma si fiican u kululaan) ama qulqulo biyo hooseeya oo hooseeya, kadibna beeralayda waxay ku talinayaan in lagu beero faro badan. Fardahaa oo kale waqtiyadii hore waxaa loo yaqaan "abuuray".
Xeerarka ilaalinta canabta ee dhexda dhexe, talooyin loogu talagalay bilowga
1. Ha ku degdegin inaad ku beerato canab cusub meel joogto ah.
U ogolow geedo yaryar inay si dagan ugu koraan shkolke ilaa burooyinka ugu horreeya ee berry ah. Waa sahlan tahay in lagu xanaaneeyo geedo shkolka ah. Si fudud loo daboolo dhaxan.
Beeraleyda ka soo jeeda waqooyiga badi xaaladaha waxay isku dayaan inayan ku beeriin geedo yar yar meel joogta ah, halkii xagaaga koowaad waxay ku beeri doonaan weel kasta oo ku jira weel weyn oo weelkani ka dhigo kala badh iyaga oo dhulka ku yaala aqalka dugsiga.
Iyadoo bilawga hawada qabow, weelasha ayaa loo wareejinayaa dhulka hoostiisa oo ay ku dhaafaan halkaa. Maalmihii ugu dambeeyay ee Maajo, waxaa laga soo wareejinayaa weelka dhulka.
Tiknoolajigaan ee geedo canab ah waxay u oggolaaneysaa inay si dhakhso ah u koraan oo ay u bilawdaan fruiting horay.
2. Qor beerkaaga beertaada
Noocyada miiska iyo canab khamri ah waxay u baahan yihiin in si gooni ah loo beeray. Nidaamka degitaanka waa ka duwan yahay.
Mawdada loo yaqaan 'Grapes' Waxay u dhexeysaa ugu yaraan hal mitir iyo badh oo leh masaafada u dhexeysa duurka, iyo noocyada khamriga - qaro weyn, mudada u dhexeysa duurka waa 0.8m, dhexda isku xiran waa 2-2.5 mitir.
Waxaa loo qaybiyaa koox canab ah, oo la siiyay caabbinta qabowga iyo foosha ee berry, way sahlan tahay in la hubiyo beerista iyo daryeelka ee safka dhexe.
Noocyo u baahan oo keliya ayaa loo baari doonaa oo la dejin doonaa.
3. Sirdhooyin laga soo qaado Yurub ama goobaha diirran waxaa lagu beeray qiyaastii jiif ahaan jiifsan..
Hooska, ugu dambeyntii waxay kordhiyaan xididadooda oo waxay la qabsadaan cimilada cusub iyo heerkulka.
Qof kastaa ma garanayo in dabacsanaantu ay tahay dabeecadda. Canaan Fruiting caleemaha la xirxiray si adag oo qumman. Tani waxay bixisaa horumar isku mid ah caleemaha dhalinyarada cagaaran.
Ma taqaanaa? Haddii dhererka loo sameeyo qiiqa, caleemaha kaliya ee ka soo baxa dusha sare kor ayey u kici doonaan, kuwa koraya waxay ka danbeeyaan koritaanka.
Noocidda duurka qabow
Dhammaan siyaabaha loo abuuro duurka udugga waxay u qaybsan yihiin kooxo qarsoodi ah oo aan hoy lahayn.
Fanaanka iyo caleenta cirifka ah waxay u baahan yihiin baadiyaha hoyga xilliga qaboobaha, sidaas darteedna waxaa loo yaqaan 'sheltered'.
Daaqadaha leh hareeraha isgoysyada iyo bareebka qummani ma qarin jiilaalka.
Heerka iyo samaynta qaabaynta ayaa loo adeegsadaa meelaha qaybta dhexe ee kiiska marka ay jiraan noocyo canab ah oo qabow u adkaysta.
Goosashada mustaqbalka ee canab waxaa la dhigay on a geedka canabkiina si fiican u bislaaday sanadkan. Laga soo bilaabo indhaheeda guga ayaa soo baxa.
U istaag qaababka qaabaynta
Sannadka ugu horreeya ee seedling waxaa loo oggol yahay in uu dego iyo samee baadiyaha keliya sanadka labaad ee nolosha, wuxuu abuurayaa shan sanadood. Marka aasaaskii qalfoofka duurjoogta la abuuray, baahida loo qabo in si joogta ah loo lumiyo.
Mustaqbalka, foomka waxaa lagu hayaa iyadoo la jarayo dayrta. Xilliga dayrta, 90% jeexdin hal sano ah ayaa laga saaraa canab dhan dadka waawayn, iyo jilbaha xagaaga ayaa la gooyaa, oo ay kooxahaasi horay u soo riixeen. Dhamaan khaanadaha aan khafiifka aheyn ayaa sidoo kale laga saarayaa.
Isku qaab ah canab si waafaqsan nidaamka Guyot.
Waqooyiga, abuurka caadiga ah wuxuu ka mid yahay kuwa ugu guulaystay. Tani waa nidaam qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka. Waxaa soo bandhigay Faransiis Guyot qarnigii 19aad. Goolashii khibrad u leh, Guyot, ayaa soo jeediyay qaabayn fudud, oo ay ku jiraan xiniinyaha canabkuna aan hoos u dhicin tiro badan oo cagaaran oo qumman oo qumman.
1 sano - xajin xoog leh, waa la soo gaabinayaa xilliga dayrta, iyada oo laba indhaha ka sarreeya dhulka ama ka sareeya goobta loo yaqaan "grafting site". Xaaladaha qaarkood, waxay u tageen saddex indhood (kaliya haddii ay dhacdo).
2 sano - Labo sanno oo jeexan oo hal sano ah waxay ka soo baxaan burooyinkooda aan laga saarin (waxay caadi ahaan koraan tan ugu xoogga badan ee hal sano), u gooyaan gaaban (ama bedelaad), ka tago 2-3 burooyinkooda iyo mid dheer.
Long waa geed canab ah oo sanadka soo socda. Xilliga dayrta, xirmo cusub iyo geedka canab khudradda cusub ayaa mar kale laga sameyn doonaa buro beddel ah. Dhererka geedka canabka ah waxaa lagu xakameynayaa manjooyin, afar koofi ayaa laga tegayaa baadiyaha yar yar.
Iyo grapevine dadka waaweyn waxay u baahan tahay 6 ilaa 12 burooyinkeeda. Waqtiga dillaacsan ee dalagga, gaabinta fallaaraha, waxaad yareyn kartaa culeyska canabkiisa midhaha, taas oo xoojinaysa Bisaylkiisa canab.
3 sano - samee xidhxidhka dhererka. In sida garaf sida ka soo burooyinkeeda of canabkiina waxay kor u soo jiid jeexan hal miro. Waxay si xoog leh u korayaan, oo ay la socdaan buruqyada laga bilaabo bedelka beddelka, si ay u horumariyaan dhakhso.
Marka ugu dambeyn soo kululaado, geedka canjuudaha wuxuu ku xiran yahay dhulka oo leh xarig tayo leh, iyada oo la tixgelinayo isweydaarka dabeecadda ee dalagga. Garter isku mid ah dhulka ayaa siin doona koritaanka xoog leh ee jeexjeexa miro hal sano ah laga bilaabo indhaha-indhaha of geedka canabka ah.
Labadaba labalaab ee ka soo jeeda boodhadhka beddelka ah ayaa loo xirxiraa xadhigga trellis, waxayna si fiican u horumariyaan. Burburkii oo la jiray beergooyska xagaaga, tirtir. Wax walba waa la gooyaa qashinka.
Waxaa jira kaliya xirtaan, taas oo ay jiraan labo canab ah oo koray xagaaga. Waxay aadi doonaan dhismaha qashinka cusub iyo geedka canabka ah. Geedi socodka taranka oo dhan waa la soo celiyaa sanad walba.
Waxaan u sameynaa daaqsinka geedaha "Fan".
Waa maxay farqiga u dhexeeya abuurista canabka ee canab ka soo samaynta Faransiiska Guyot.
Sameynta "fan" waxay ku siinaysaa canab aan ahayn laba gacmood oo miro ah, laakiin shan ama kabadan. Xeeladahaas waxaa lagu xirxiray fan ah iyaga oo jihada caleemaha si qumman. Dhererka gacmaha ayaa tilmaamaya qaabka loo isticmaalo.
Xirmooyinka canabku waa kuwo waaweyn oo yar yar, heer caadi ah oo aan caadi ahayn, hal iyo dhowr dabaq ah, marka xayawaanku midba midka kale ku xiran yahay.
Gobollada woqooyiga, waxay aad u jecel yihiin in ay isticmaalaan noocaan aan caadi ahayn, haddii kale "Fan" ama "Tower Tower". Way ku habboon tahay in lagu daboolo duurka qaabkaas oo kale ah, way sahlan tahay in la sameeyo qaababyada gacmaha iyo dib u soo nooleynta baadiyaha iyadoo la isticmaalayo manjooyin. Waxay ku kordhisaa wax-soosaarka sare.
1. Labada sanno ee ugu horeeya waxaan ka taxadarnaa canab, sida isticmaalka farsamada Guyot.
2. Guga sannadka saddexaad wuxuu ku bilaabmaa samaynta shandada. Waxaan ku koraan labo canabki ku jira hal gacan.
3. Geedka canabka ah ee saddex-sano jir ah horay ayuu u dhashay, dhirtana wuxuu ku koraa afar jibaar. Jeexjeexyadaasi waa la gooyaa xilliga dayrta, marka la eego dhererka gacmaha. Dhererka ugu yar ee cidhibta cowsku waa mid aan ka yareyn nus mitir. Waxay ku xiran yihiin barka hoose ee trellis by fan ah. Garter kor u kaca ilaa 50 cm dhulka.
Xilliga xagaaga, gebi ahaanba hal sano oo jeexjeex ah ayaa la gooyaa dhamaan gacmo-qabadyada, oo kaliya 2-3 siyood ah. Waxay ku socon doonaan abuurista dambe ee xiriiriyaha miro iyo sii wadida xabbado canabka ah. Waxay si adag ugu xiran yihiin trellis.
Xitaa ka hor hoyga beerta canabka ah ee xilliga qaboobaha, geedka canjiga ah oo dhan iyo antennae waa la jaraa. Haddii geedka canabka ah ee geedku uu si fiican u qoondeeyey, ka dibna waxaan qaniineynaa tuubada sare on geedka canabka ah ee la jarjarey, oo gaabin karbaash oo hoos ku xajisto si loo beddelo buro.
Mustaqbalka, qaabaynta noocan oo kale ah ayaa mar hore loo sameeyaa dhamaan gacmo-qabatooyinka, jarida geed canab ah oo 5-6 indhood ah oo loogu talagalay caleemaha miraha, iyo jarista geedka canabka ah ee hoose ee 2-3 xabo oo loogu talagalay buro beddel ah. Si tartiib ah, gacmo-qabadku waxay noqdaan kuwo ka sii badan, tiradooduna waxay kor u qaadaan illaa 7-8.
Haddii beeraha canabka ah la dhigo qalab qallalan ee xilliga jiilaalka, ka dibna laamaha midho badan ayaa midho dhali doona sannado badan.
Dhulka beerta hoostiisa ku dhex yaal way wanaagsan tahay. Xilliga dayrta, Bacriminta waa in la buuxiyaa qashin qubka beerta beertayda.
Ilaa 10 kg oo ah digada + 50 g of amooniyam iyo cusbo potassium + 100 g of superphosphate per kayn. Ka hor inta ubax iyo sida ugu dhakhsaha badan berry bilaabaan inay heesaan, bacriminta dareeraha waxaa lagu dalbadaa weheliyaan waraabka.
20 g of superphosphate + 10 g oo amooniyam ah ayaa la qaataa baadiyaha. Bacriminta waxaa lagu kala diraa baaldi biyo ah. Iyada oo xal this, geedka waxaa la waraabiyaa xididka ama iyada oo loo marayo grooves drainage.
Beerta canabka ah waxay u baahan tahay dabacsanaan joogto ah ee ciidda safka iyo inta u dhaxaysa saf. Xilliga xagaaga, winegrowers ayaa loosen ka badan 6-7 jeer.
Waa muhiim! Haddii Bacriminta kiimikada ah iyo Bacriminta dabiiciga ah la wada isticmaalo, qaddarkoodu waa kala badh.
Waraabinta iyo quudinta canab
Waraabinta sabuurada canabka ah ee dhallinyaradu waa lagama maarmaan. Si aad u quudiso oo canabkiina u dhasho wakhtiga, waxaad ku dhajin kartaa dhalooyin balaastiig ah oo leh hoos-gooyo at seedling kasta. Waxay u fiicantahay inaad qaadato 2 ama 5 litir oo litir ah oo qoorta ku xirto (aan lahayn tuubo). Qalab noocan oo kale ah ayaa fududayn doona daryeelka canab ee dadka cusub.
Haddii noocyada kala duwan ee canabku yahay miis, ka dib marka dhowr sano kadib, dhalooyinka waraabka ayaa lagu beddelaa tuubooyin dherer ah oo mitir ah.
In noocyo sabiib ah farsamo, weelasha waraabka ayaa la saarayaa saddex sano ka dib. Noocyo farsamo ah waxaa lagu magacaabaa canab khamri ah. Isaga qudhiisa ayaa biyaha ka soocaya ciidda adigoo u mahadnaqaya xididada qoto dheer.
Tiknoolajiyad dhammaystiran oo waraabka waraabka ee dadka waaweyn ee canabka. Waa lagama maarmaan in la xadido waraabinta. Kaliya waraabka canab yar (ilaa 2 sano) iyo dayrta xilliga dayrta ee dhammaan noocyada, bixinta biyaha qaboojinta jiilaalka, loo baahan yahay iyo faa'iido leh.
Toddobaad ka hor bilowga bilaabashada ubax, waraabinta biyaha - qoyaanka xad-dhaafka ah waxay keeni karaan daadinta midab-dhalatada iyo dhalidda luntay.
Waa muhiim! Ha ku maydhin beeraha canabka ah adigoo rushaynaya! Tani waxay dhalisaa cudurro fangas. Badanaa beeraha canabka ah, qashin qubka ayaa la qodayaa, tuubooyinka hawada aerajiga ayaa lagu rakibay meel fog oo ah mitir nus ah oo ka yimaada duurka. Canabyada sida caleemaha qallalan, sidaas darteed haddii aad awoodid, ka samee hannaan hufan hareeraha duurka.
Sida loo diyaariyo geedka canabka ah xilliga jiilaalka
Canabku waa heerkulbeer iyo jiilaal fiican oo keliya oo hoy ah. Xilliga dayrta, ka hor bilawga ah ee dhaxan daran, waxaad u baahan tahay inaad caleemaha oo dhan dhulka ku ridaan. Iyaga iyaga, ka hor-ku shub lakabka ah caws. Ku dhaji dusha daboolka dhulka oo leh xargo oo ku rusheeyso dhulka ama ku dul qor qalabka insulating on top iyaga.
Waxay noqon kartaa laamiyo laamood, kartoon ama sanduuqyo alwaax ah, lutrasil ama agrofibre, duubnaa dhowr lakab.
Sidee loo go'aamiyaa goorta la furayo canabka kadib marka suunka iyo haddii aysan qaboobin miraayada soo noqota?
Guga, sida ugu dhakhsaha badan ee barafku u dhalaalaan iyo heerkulka hawada ayaa la aasaasay 5-7 digrii heerka Celsius, hoyga ayaa laga saaraa, waxaannu gogol dhignaa geedka ka soo jeeda jiilaalka.
Laakiin qalabka guriga hoyga laguma kaxeyn karo trellis trellis ah, waxay ku hadhaan meel u dhow, haddii ay dhacdo in ay soo noqoto dhaxan. Marka ay dhacdo in hoos u degan heerkulka, waa sahlan tahay in lagu tuuro hoyga on geedka canabka ah. Oo kaliya dhamaadka bisha Abriil, geedka canabka ah waxaa lagu kori karaa garter on trellis.
Ma taqaanaa? Haddii caws loo isticmaalo hoyga beerta canabka ah, ka dibna caws la jarjaray sannadkii hore. Ka dibna jiir ma degi doono hoyga jiilaalka of canab ah oo ma waxyeelayn doonaa canabkiinna.
Waxaa laga yaabaa inay tahay talooyinkayagu waxay kaa caawin doonaan sidii aad u abuuri laheyd beertid. Waxaan rajeyneynaa in shaqada ruuxi iyo jidheed ay maalgashi ku abuurtay abuurka canabka, waxay kuugu soo laaban doonaan rucubyo macaan oo cajiib ah.